Xubin ajnabi ah oo lagu dilay khilaaf ka dhex dhashay maleeshiyada Al-Shabaab ee degmada Jilib - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXubin ajnabi ah oo lagu dilay khilaaf ka dhex dhashay maleeshiyada Al-Shabaab ee degmada Jilib
Xubin ajnabi ah oo lagu dilay khilaaf ka dhex dhashay maleeshiyada Al-Shabaab ee degmada Jilib
November 13, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ku dilay xubin katirsan oo ajnabi ah, sida wararku sheegayaan.
Macluumaad ay warbaahintu ka heleen deegaankaas ayaa sheegaya in khilaaf uu ka dhex dhashay xubno katirsan maleeshiyada.
Khilaafka ayaa yimid kadib markii xubno katirsan maleeshiyada la damcay in la xiro kadib markii laga shakiyay in ay kasoo horjeedaan Al-Shabaab.
Xubnahaas ayaa looga shakiyay in ay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS, sida wararku sheegayaan.
Koox katirsan Al-Shabaab ayaa weerartay masaajid kuyaala Jilib halkaas oo ay ku jireen kooxda la doonayay in la qabto balse mid kamid ah ajaaniibta masaajidka ku jiray ayaa diiday in uu is dhiibo kadibna bumbo gacmeed lasoo baxay taasoo keentay in la toogto, ninkaasayaa magaciisa lagu sheegay Abu Anas Al-Masri, oo u dhashay dalka Masar kanatirsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale deegaankaas ka qabatay ilaa 100 qof oo isugu jira xubno katirsan maleeshiyada iyo dadka deegaanka.
Maxkamada ciidamada Puntland oo dil toogasho ah ku xukuntay Caloolgeel oo loo heysto qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo
Wiilka hoggaamiyihii hore Libya Qadaafi oo xabsiga laga sii daayay
Wiilka uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Libya Mucamar Al-Qadaafi ayaa u muuqda in xabsiga laga sii daayay, sida ay sheegayaan warbixino soo baxay. Sayf al-Islaam Qadaafi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah sanadkii hore, [...]
Wada-hadal u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo ururka Ahlu Suna Waljamaaca oo ka furmay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wada-hadal u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo ururka Ahlu Suna Waljamaaca ayaa manta oo Talaado ah ka furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ilo-wareeydu sheegeen. Kulanka oo ay taageerayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ujeedadiisu [...]